अहिले सम्म कुन जिल्लामा कसले जिते प्रमुख पद ? (सूची सहित) | Nagarik News - Nepal Republic Media
अहिले सम्म कुन जिल्लामा कसले जिते प्रमुख पद ? (सूची सहित)
४ जेष्ठ २०७४ २३ मिनेट पाठ
काठमाडौं- स्थानीय तहको पछिल्लो परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म नेकपा एमालेको अग्रता कायम छ। एमालेले ८९ स्थानीय तहमा जित हाँसिल गरिसकेको छ। एमालेलाई संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कडा चुनौति दिँदै ८३ तहमा आफ्नो बर्चस्व कायम राखेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र ३९ तहमा सिमित छ। यस्तै तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवार स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी भएका छन्। नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले १/१ तहमा जितेका छन्। यो परिणाम २ सय १७ स्थानीय तहको परिणाम आउँदा सम्मको हो।
माछापुच्छ«े गाउँपालिका, कर्ण गुरुङ, नेकपा एमाले
गुभ्राकोट, हस्त पुन, कांग्रेस
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७४ २२:३१ बिहीबार
अहिले जिल्लामा कसले जिते प्रमुख पद सूची सहित